I-SoloCam E20, ikhamera yangaphandle esebenza ngezindlela eziningi kakhulu evela ku-Eufy [Buyekeza] | Izindaba zegajethi
UMiguel Hernandez | 21/07/2021 10:00 | General, Izibuyekezo
Ukuphepha kwasekhaya kubaluleke kakhulu kulezi zikhathi zasehlobo, lapho kungaba ngamaholide noma ukuzilibazisa, sithambekele ekuchitheni isikhathi esiningi kude nasekhaya. Ngakho-ke, akukaze kube buhlungu ukusebenzisa wonke amathuba ubuchwepheshe obusinikeza wona ukuze sizigcine siphephile futhi ngaphezu kwakho konke ukuzola.
Yithole nathi futhi uthole ukuthi ayini amakhono ayo nokuthi yini le khamera yangaphandle ye-Eufy ekwazi ukuyenza, ngabe uzophuthelwa yiyo?
2 Okungenantambo kanye nesitoreji sendawo
3 Izinhlelo zokuphepha ezisetshenzisiwe
4 Ukuxhumana nokuhambisana
Idivayisi ilandela umugqa owejwayelekile we-Eufy design. Sinedivayisi engunxande, enwetshiwe, futhi enemiphetho eyindilinga. Engxenyeni engaphambili yilapho sizothola khona zombili izinzwa nekhamera, kanti engxenyeni engemuva kunokuxhumana okuhlukile, njengokusekelwa kodonga. Siyakhumbula ukuthi yakhelwe futhi ibekwe ngaphandle, ngakho-ke lolu donga luyathandeka ikakhulukazi. Ukufakwa kwayo kulula kakhulu ngoba singakunamathela ngetheyiphu emaceleni womabili, noma singasikinya ngqo odongeni.
Usayizi: 9.6 x 5.7 x 5.7
Isisindo: I-400 amagremu
Ukusekelwa kweselula kunendawo enemagnethi eshelelayo kahle futhi esivumela ukuthi senze ushintsho ngobubanzi bokuthakazelisa bokuhamba. Ezingeni lokuklama kubalulekile ukukhumbula ukuthi sikhuluma ngekhamera yangaphandle, ngakho-ke sinokuvikelwa kwe-IP65 ezimweni sezulu esingesihle, ngendlela efanayo nefemu ethembisa ukusebenza okulungile zombili ezimweni ezishisayo kakhulu nasezimweni ezibandayo kakhulu, esingakakwazi ukukhathalogi. Kulesi sigaba asikwazi ukusola ikhamera ngokuthi, ngaphandle kokucindezela ngokweqile, ibukeka yinhle noma kuphi. Ungayithenga ngentengo engcono ngqo ku-Amazon.
Okungenantambo kanye nesitoreji sendawo
Ngokusobala sikhuluma ngekhamera engenazintambo engu-100%, inebhethri ngombono wokuthi, ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, linikeza izinyanga ezine zokuzimela. Ngezizathu ezisobala asikwazanga ukuqinisekisa ukuthi izinyanga ezine zokuzibusa zigcwaliseke ngokuphelele, pKepha inkampani isixwayisa ngokuthi lokhu kuzimela kuzoguqulwa ngokuya ngocwaningo esilwenzayo lapho siqopha, kanye nezimo zezulu. Sesivele sazi ukuthi kokubili ukushisa nokubanda kuyizimo zokushisa ezithinta kabi amabhethri e-lithium.
Le khamera inesitoreji sendawo esingu-8GB, siyakhumbula ukuthi iqopha okuqukethwe kuphela lapho izinzwa esizisungulile ukuthi "gxuma", ngakho-ke nge-8GB kufanele zanele ngaphezu kweziqeshana ezincane esizigcinayo. Ukwenza ngcono ukuvikelwa nobumfihlo, le khamera ine-AES256 protocol yokuphepha esezingeni lokubethela, futhi okuqoshiwe kuzogcinwa izinyanga ezi-2, isikhathi lapho ikhamera izoqala ukuwabhala ngaphezulu, noma kunjalo, konke lokhu kungalungiswa ngohlelo lwe-Eufy. Lokhu kusho ukuthi ikhamera ayinazo izinhlelo zokubhaliselwe noma izindleko ezingezwe ekuthengeni.
Izinhlelo zokuphepha ezisetshenzisiwe
Lapho ususebenzise ikhamera, uzokwazi ukusungula izindawo ezimbili zokuphepha, ukuze kungabikho konke ukunyakaza kwe-engeli yokubuka okunikeze izexwayiso. Ngendlela efanayo, uhlelo lune-Artificial Intelligence, ngale ndlela luzokwazisa umsebenzisi kuphela lapho "umhlaseli" egoduka, aze akhombe nokuthi uzifihlile noma uhamba ngezilwane ezifuywayo. Izexwayiso ziba khona manjalo njengoba sikwazi ukubona, cishe imizuzwana emithathu kuthatha isikhathi eside ukuthi ikhamera ithole ukunyakaza okuhlaselayo futhi ibonise isexwayiso kudivayisi yakho yeselula.
Uhlelo lokuqopha oluphelele lwe-HD 1080p
Uma uhlelo lusetshenzisiwe, ikhamera izokhipha umsindo othi "i-alamu" ofika kuma-90 dB, onganikeli ukusebenza okuphezulu ngokwanele ezingeni lomsindo, kepha futhi kuzocasula obonakalayo. Lokhu kungaba ukuhlanganiswa kokuphepha. Ngendlela efanayo, ikhamera inohlelo lokubona ebusuku ngama-infrared LEDs evumela ukuhlonza okuyikho kwezifundo ebangeni elifinyelela kumamitha ayi-8. I-Artificial Intelligence yekhamera ye-Eufy ithembisa izikhathi eziphindwe ka-5 ukukhomba izihloko ezihlaselayo futhi inikeza ukwehliswa okungama-99% kuma-alamu angamanga.
Okokuqala, le khamera inokuhambisana okugcwele nababili babasizi abakhulu abasemakethe, Sikhuluma ngokusobala nge-Amazon Alexa neGoogle Assistant, ukumiswa kulula ngokusebenzisa uhlelo lokusebenza futhi ukuxhumana kuyashesha Lapho sesixhume ikhamera kunethiwekhi efanayo ye-WiFi esiyilungisile, kithi sesiqinisekisile ukuthi nge-Alexa ukuhlanganiswa kulula kakhulu futhi kuphelele. Ukuphathwa kwesicelo sika-Eufy uqobo, okutholakala nge-iOS ne-Android sekukonke, Kusivumela ukuthi silungise i-angle, siphathe izexwayiso, ubuke okuqukethwe okusakazwayo futhi wazi isimo samanje sebhethri phakathi kweminye imisebenzi eminingi. Asisweli lutho.
Omunye umsebenzi wohlelo lokusebenza kungenzeka ukuthi usizakale ngesipikha esihlanganiswe kwikhamera, okungukuthi, sizokwazi ukubona ngesikhathi sangempela okwenzekayo futhi sikhulume ngezindlela ezimbili, okusho ukuthi, ukukhipha imiyalezo nokuyithatha ngemakrofoni yakho. Ngale ndlela, uma ngokwesibonelo izingane zisensimini, singazixwayisa ukuthi sekuyisikhathi sokuya ekhaya ngqo kusuka kwikhamera futhi ngaphandle kwenkinga, futhi sicacise nezimo ngendoda eletha i-Amazon.
Kuthunyelwe ku: 21 de julio de 2021
Ukulungiswa kokugcina: 17 de julio de 2021
Ikhamera ye-Eufy iphelele impela, inokumelana okuqinisekisiwe lapho ungaphandle ngaphandle kwezindleko ezingeziwe. Okuhlinzekwa yi-Eufy, ngaphezu kwenani layo lemali, ukuqina kwemikhiqizo yayo kanye nesevisi yamakhasimende eyaziwa kahle.ukuphepha kwe-SoloCam ...yize ngokuvamile kuvame ukuba nesaphulelo se-10% ngezikhathi ezingavamile, ngakho-ke sincoma ukuthi uhlale unake umphumela kuwebhu ejwayelekile. Ungahlola futhi idivayisi kuwebhusayithi yayo esemthethweni.
Impahla yokwakha nempumelelo
Inqubo yokusetha kwesinye isikhathi yehluleka
Ububanzi be-WiFi abukho kangako
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » I-SoloCam E20, ikhamera yangaphandle esebenza ngezindlela eziningi kakhulu evela e-Eufy [Buyekeza]
I-Asus TUF Dash F15, amandla kanye nokuklanywa kungahambisana